အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၄ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanmar Gazette » အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၄
အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၄
Posted by kai on Dec 4, 2014 in Myanmar Gazette | 48 comments
လင်ပြိုင်၊ မယားပြိုင်ထားပါက ထောင် ခုနစ်နှစ်အထိ ချနိုင်သည့် တစ်လင်တစ်မယားစနစ် ကျင့်သုံးခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်း အမျိုးသမီးများ ကြိုဆို
တရားဝင်အိမ်ထောင်ရှိ လျက်နှင့် ထပ်မံလက်ထပ်ပါက ထိုသူကို ထောင်ခုနစ်နှစ်အထိ ချ မှတ်နိုင်ကြောင်း လွှတ်တော်သို့ ပေးပို့လိုက်သည့် တစ်လင်တစ်မယားစနစ် ကျင့်သုံးခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းတွင် ဖော်ပြထား ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်က ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တစ်ဆင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် အဆိုပါ ဥပဒေကြမ်းတွင် တရားဝင်လက်ထပ် ထိမ်းမြားပြီးသူသည် မပြတ်စဲရသေးဘဲ ထပ်မံလက်ထပ်ပါက ထိုသူကို ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ ၄၉၄ ကျူးလွန်ကြောင်း မှတ်ယူရမည်ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။
အမျိုးသားများ မိန်းမအများအပြားယူခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပွားနိုင်သည့် အိမ်ထောင်ရေးမှုခင်းများကို တားဆီးနိုင်ရန်နှင့် အမျိုးသမီးများ မယားပြိုင်အဖြစ် ရောက်ရှိခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် တစ်လင်တစ်မယားစနစ် ကျင့်သုံးခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းကို ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်က ရေးဆွဲ ၍ လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းခြင်း ဖြစ်သည်။
‘‘ပုဒ်မ-၄၉၄ ဆိုတာ လင် (သို့မဟုတ်) မယားရှိလျက်နဲ့ ထပ်မံထိမ်းမြားခြင်းပြုရင် အဲဒီလူကို ထောင်ခုနစ်နှစ်အထိ ချမှတ်နိုင်တယ်လို့ ပြဋ္ဌာန်းထားတာ ဖြစ် တယ်။ ဒီဥပဒေကြမ်းမှာ အဓိက အချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေထိုင်သူ အကုန်လုံး ဒီဥပဒေနဲ့ လက်ထပ်ထိမ်းမြားတာကို လက်ကို လက်ခံရမယ်ဆိုတာပဲ။ ဒါဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တရားဥပဒေ အနေအထားအရ လူမျိုးဘာသာအလိုက် ဓလေ့ထုံးတမ်းအလိုက် ဥပဒေတွေကို အသိအမှတ်မပြုဘဲ တမင်သက်သက် ချုပ်ချယ်ချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်တာဖြစ်တယ်။ ဒီနောက်ကွယ်မှာ နိုင်ငံရေး ရည်ရွယ်ချက်တွေ ရှိတယ်လို့ ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်’’ ဟု တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးကိုနီက ပြောကြားသည်။
…………မြန်မာ့ဓလေ့ ထုံးတမ်းစဉ်လာ ဥပဒေတွင် ယောက်ျားများ အနေဖြင့် အကန့်အသတ်မရှိ အများယူနိုင်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာ ထုံးတမ်းစဉ်လာတွင် ယောက်ျားများမှာ အကန့်အသတ်ဖြင့် အများ(လေးဦးအထိ) ယူနိုင်ကြောင်း ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာမှာမူ တစ်လင်တစ်မယားစနစ်ဖြစ်ပြီး ကွာရှင်းပြတ်စဲပြီးမှသာ နောက်တစ်ဦးကို ထပ်ယူနိုင်သည်။
ထို့ပြင် Burma Law Act ပုဒ်မ ၁၃ အရ သက်ဆိုင်ရာလူမျိုး ဘာသာ ဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာ အလိုက် ဥပဒေများကို ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် တရားရုံးများက အသိအမှတ်ပြုရမည် ဆိုသည့် အချက်နှင့်လည်း ယခု တစ်လင် တစ်မယားစနစ် ကျင့်သုံးခြင်းဆိုင် ရာ ဥပဒေမှာ ဆန့်ကျင်နေကြောင်း တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ပီအာရ်လျှောက်မည့်သူများ နှစ်စဉ်ကြေး ဒေါ်လာတစ်ထောင် သတ်မှတ်
နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ယူထားသူနှင့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပပြစ်မှု မှတ်တမ်းရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား ဟောင်းများကို အမြဲတမ်းနေထိုင် ခွင့်ပေးမည်မဟုတ်ကြောင်း လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမောင်မောင်သန်းကပြောကြားလိုက်သည်။
အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းကို ငါးနှစ်သတ်မှတ်ထားပြီး လျှောက်ထားခွင့်၏ နှစ်စဉ်ကြေး မှာ ဒေါ်လာတစ်ထောင်ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ ငါးနှစ်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးပါက သက်တမ်းတိုးခွင့်ရှိမည်ဖြစ်သည်။
‘‘မြန်မာနိုင်ငံသားဟောင်း တွေအနေနဲ့ ပီအာရ်လျှောက်ချင်တယ်ဆိုရင် ဟိုနိုင်ငံက အခွင့်အရေးတွေ မစွန့်လွှတ်ချင်လို့ နိုင်ငံသား ခံယူခွင့်တော့ ဆက်ယူထားလို့ရ တယ်။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်တော့ စွန့်လွှတ်ရမယ်။ မစွန့်လွှတ်ဘူးဆိုရင်တော့ ပီအာရ်ပေးဖို့ ဆက်လက်စဉ်းစားမှာမဟုတ်ပါဘူး’’ ဟု ၎င်းက ပန်းဆိုးတန်းလမ်း လ၀ကရုံးတွင်ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
အခြားနိုင်ငံများတွင် ဒုက္ခသည်အဖြစ် ခံယူထားသူများ၊နိုင် ငံရေး ခိုလှုံခွင့်ရယူထားသူများ၊ ပြစ်မှုမှတ်တမ်းရှိသူများ၊ ကျန်းမာရေးမကောင်းမွန်ဘဲ ကူးစက်ရော ဂါခံရသူများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို မလိုက်နာသူ၊ အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်လျှောက်ထားရာတွင် လူတွေ့စစ်ဆေးမခံ ယူသည့်သူ၊ အခွန်မထမ်းဆောင် နိုင်သူနှင့် နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာမရှိသူ၊ ပြည်ဝင်ခွင့်သုံးနှစ်အထက်မရှိသူများကို အမြဲတမ်း နေထိုင်ခွင့် လျှောက်ထားခွင့် မရှိသူများဖြစ်သည်ဟု ၀န်ကြီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်
​ဟောဗျာ အူရီဒူး ကတ်​နဲ့ကျ ရွာထဲ ​လျောကနဲ ​ရောက်​လာတာပဲ ။ MPT တို့ တယ်​လီတို့နဲ့ ၀င်​မရတာ ကြာပီ…….အဲ့ဒါ​ကြောင့်​ သူကြီးကို က​ကြောင်​ကြီးက မာမွတ်​ခိုင်​လို့ ​ခေါ်တာမသိ ¿¿¿¿
ပျောက်နေတာကြာသမို့… မိန်းမများယူသွားပြီး… အလုပ်တွေရှုပ်နေသလားလို့..
ခုတော့.. မစ်ဒယ်အိစ့်က ကကတ်ကြီးနဲ့ပေါ့နော…။
အော် ရေးမှ ရေးပါ့မလား စောင့်နေတာ ပြောချင်လို့ :mrgreenn:
အလွန်အင်မတန်မှ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုဆိုပါတယ်လို့ :loll:
“တချို့ဘာသာတွေနဲ့ ငြိနေတာလား “ဒါဆို ဥပဒေအထက်မှာ ဘာသာရေးရှိနေတာလား လို့ မေးခွန်းထုတ်ရမှာပဲ
ပြောတော့ဖြင့် ဥပဒေအထက်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိဘူးဆို :loll:
ဒီခေတ်မှာ များမြောင်လှတဲ့ မကောင်းတဲ့ဘက်ကို ဦးတည်တဲ့ လူမှုရေးအကျိုးဆက်တွေတော်တော်များများကို ဒီဥပဒေက ထိန်းကြောင်းပေးသွားနိုင်တာမို့ အမျိုးသမီးထု တရပ်လုံးက အင်တိုက်အားတိုက်ကို ထောက်ခံပေးရမယ်
မြန်မာပြည်မှာ အမျိုးသမီးဦးရေက အမျိုးသားတွေထက် ပိုများနေတာမလား
ဒီနေရာမှာ အရင်သုံးရမယ် :loll:
ဂေါတမဗုဒ္ဓလက်ထက်ကတည်းကလက်ခံထားတဲ့.. ..” တလင်၊မယားများများ” စနစ်ကို ဖောက်ပြင်ဖို့ကြိုးစားကြပြီပေါ့…။
ဘုန်းကြီးဦးရေကို.. ၅သိန်းကျော်ကနေ.. ၅သောင်းလောက်.. ကျစ်လစ်စွာ(သာ)ကျန်ရှိအောင်လည်း.. လုပ်ဖို့အမျိုးသမီးထုမှာ သမိုင်းပေးတာဝန်.. လူသားတာဝန်ရှိပါတယ်..။
ပြိုင်ကြ၊ ပြိုင်ကြ၊ ပြိုင်ကြ ပါ။
အပြိုင်ရှိမှ တိုးတက်တာ မဟုတ်ပါလားးး
ကိုဖြူ ။ ။ ပြစ်မှု(ရာဇ၀တ်မှု)တွေဟာ ဘယ်သူတွေနဲ့ သက်ဆိုင်သလဲဆရာ။
ယူတီကေ ။ ။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေရဲ့ ပြဌာန်းချက်တွေဟာ ချိုးဖောက်တဲ့သူ (မည်သူမဆို) (Whoever) နဲ့ သက်ဆိုင် တယ်။ ဒီနိုင်ငံရဲ့ နယ်နိမိတ်အတွင်းမှာ ရောက်ရှိနေတဲ့၊ နေထိုင်နေတဲ့ နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံခြားသား၊ မည်သူမဆို (ကျား၊ မ၊ လူမျိုး၊ ဘာသာမရွေး) အပေါ် သက်ဆိုင်တယ်။
ဥပမာ ။ အင်္ဂလန်မှာ – အင်္ဂလန်နိုင်ငံသား A အတွက် မယားခိုးမှုဟာ ပြစ်မှုမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် A ဟာ မြန်မာပြည်ရောက်ရှိစဉ်မှာ လင်ရှိမယားနဲ့ မယားခိုးမှု ကျူးလွန်ခဲ့ရင် ဒီနိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေအရ မယားခိုးမှု (ပုဒ်မ-၄၉၇) မြောက်တယ်။ (Lex Fori) (Law of the forum or Court) (အမှုစစ်ရုံးရဲ့ စီရင်ခွင့်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ဥပဒေ)
ကိုဖြူ ။ ။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာအယူဝါဒ (Personal Law) အပေါ် အခြေခံပြီး ဆုံး ဖြတ်ရတဲ့အမှု ပြဿနာတွေကို ရှင်းပြပါဆရာ။
ယူတီကေ ။ ။ လက်ထပ်ထိမ်းမြားရေး၊ လင်မယားကွာရှင်းရေး၊ အမွေဆက်ခံရေး၊ အမွေခွဲဝေရေး၊ (ဇာတ်) မျိုးနွယ် ကိစ္စ၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း ကိစ္စတွေမှာ အမှုသည်တွေရဲ့ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာအယူဝါဒအပေါ် အခြေခံပြီး ဆုံးဖြတ်ရတယ်။
ဥပမာ ။ အမှုသည်တွေက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ရင်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာတရားဥပဒေ၊ မဟာဗေဒင် ဘာာသာ ၀င်တွေဖြစ်ရင် မဟာဗေဒင် တရားဥပဒေ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေဖြစ်ရင် ခရစ်ယာန်တရားဥပဒေ၊ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေဖြစ် ရင် ဟိန္ဒူတရားဥပဒေအရ အဆုံးအဖြတ်ပေးရမယ်လို့ (မြန်မာနိုင်ငံတရားဥပဒေများအက်ဥပဒေ) ပုဒ်မ ၁၃(၁) မှာ ပြဌာန်းထား တယ်။ (The Burma Laws Act, 1898) (The Burma Courts Act, 1872)
ကိုဖြူ ။ ။ “ဗုဒ္ဓဘာသာတရားဥပဒေ” (Buddhist Law) ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆရာ။
ယူတီကေ ။ ။ မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေ (Customs) ကို ဆိုလိုတယ်။ ဘာသာရေးအရ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ လိုက်နာရတဲ့ ဥပဒေမဟုတ်ဘူး။ ဘာသာရေးရောယှက်ခြင်း ကင်းတယ်။ ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာ သာတရားဥပဒေဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းအစား “မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေ” (Burmese Customary Law)လို့ ခေါ်ဝေါ်လာခဲ့ကြ တယ်။
ကိုဖြူ ။ ။ “မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေ” ရဲ့ အရင်းအမြစ် (Sources) တွေက ဘာတွေလဲဆရာ။
ယူတီကေ ။ ။ (က) ဓမ္မသတ်များ (လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၂၀၀ ကျော်မှ ၁၅၀ အတွင်း ပြုစုခဲ့သည်။)
(ခ) စီရင်ထုံးများ (တရားသူကြီးများပြုလုပ်သည့် စီရင်ချက်၊ ဥပဒေများဖြစ်သည်။)
(ဂ) တည်ဆဲဓလေ့ထုံးတမ်းများ (အမြဲတစေရှင်သန် နုပျိုနေသော ဓလေ့ထုံးတမ်းဖြစ်သည်။)
(ဃ) ပြဌာန်းဥပဒေများ (ကိတ္ထိမ မွေးစားခြင်းအက်ဥပဒေ၊ ၁၉၅၄-ခု ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းမများ အထူး ထိမ်းမြားမှုနှင့် အမွေဆက်ခံမှုအက်ဥပဒေ)
ကိုဖြူ ။ ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ယောက်ျားနဲ့မိန်းမ လက်ထပ်ထိမ်းမြားရေး၊ အမွေဆက်ခံရေး စတာတွေဟာ မြန်မာ ဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေနဲ့ သက်ဆိုင်တာပေါ့နော်။
ယူတီကေ ။ ။ ရှေးယခင်က ဒီကိစ္စမှာလဲ အငြင်းပွားမှုတွေရှိခဲ့တယ်။ တရုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ယောက်ျားနဲ့ မြန်မာဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင် မိန်းမ တို့နှစ်ပေါင်းများစွာ ပေါင်းသင်းလာခဲ့တဲ့ကိစ္စမှာ ပြဿနာတွေပေါ်ခဲ့တယ်။ ပြဿနာတွေကတော့ –
(က) ဗုဒ္ဓဘာသာတရားဥပဒေဆိုတာ ဘယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတရားဥပဒေကို ဆိုလိုတာလဲဆိုတဲ့ ပြဿနာ ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ တရုတ် ဗုဒ္ဓဘာသာဥပဒေ၊ တိဘက်ဗုဒ္ဓဘာသာဥပဒေ၊ ဂျပန်ဗုဒ္ဓဘာသာဥပဒေ၊ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဥပဒေသည် အမျိုးမျိုးကွဲပြားနေခဲ့ တယ်။ ဘယ်ဥပဒေကို လိုက်နာမလဲ။
(ခ) ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ လက်ထပ်ရင် ဘယ်လိုဘာသာရေး အခမ်းအနားလိုတယ်။ အမွေပုံကို ဘယ်အချိုးနဲ့ ဘယ်လို ခွဲရတယ် ဆိုတဲ့ လောကီလူမှုရေး ကိစ္စတွေကို ဗုဒ္ဓက တိတိကျကျ ဟောကြားခဲ့တာ ရှိသလား၊ အခြားဘာသာတွေ မှာရှိတယ်။
(ဂ) မြန်မာတွေ လိုက်နာကျင့်သုံးနေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဥပဒေဆိုတာ ရှေးဗမာတွေရဲ့ ဓမ္မသတ်ကျမ်းနဲ့ ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေကို အခြေပြု လိုက်နာကြတာဖြစ်တယ်။ အခြားနိုင်ငံက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ ဥပဒေနဲ့ မတူညီပြန်ဘူး။
(ဃ) ပြဌာန်းလိုက်တဲ့ “ဗုဒ္ဓဘာသာတရားဥပဒေ” ဆိုတာ မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေ တစ်ခုတည်းကို ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။ မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေဆိုတာ ဗုဒ္ဒဘာသာ တရားဥပဒေအနက်က၊ တစ်ခုသာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာဓလေ့ထုံးတမ်း ဥပဒေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာတရားဥပဒေရဲ့ တစ်ခုတည်းသော ဥပဒေလို့ မှတ်ယူချက်ဟာ လွဲ မှားတယ်။ (ဟောင်ကူနှင့် မသင်း – SJ – (1881) 135 စီရင်ထုံး) ဒီလိုအငြင်းပွားမှုတွေ ဖြစ်ခဲ့တယ်။
ဒီပြဿနာတွေကို ၁၉၅၁ ခုနှစ်မှာ စီရင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ ဒေါ်သိုက်(ခ)ဝေါင်မသိုက်နှင့် စီရောင်အလင်း (၁၉၅၁-မတစ-၁၃၃) မှာ ဒီလိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပါသည်။
“မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်နေထိုင်သည့် ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လျှင် မည်သည့်နိုင်ငံကဖြစ်စေ၊ မည်သည့်လူမျိုးပင်ဖြစ်စေ၊ ထိမ်း မြားရေးနှင့် အမွေဆက်ခံရေး နှစ်ရပ်လုံးတွင် မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေနှင့် သက်ဆိုင်စေရမည်တဲ့။”
ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုင်းရင်းသားများဖြစ်တဲ့ (ကချင်၊ ကရင်၊ ကယား၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း) ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် များဟာ မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေနဲ့ သက်ဆိုင်တယ်လို့ စီရင်ထုံးများမှာ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
ကိုဖြူ ။ ။ ဘာသာခြားယောက်ျားကိုယူထားတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းမတွေအကြောင်းကို ပြောပြပါဆရာ။
ယူတီကေ ။ ။ ရှေးရှေးဘုရင်များ လက်ထက်က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းမတွေဟာ ဘယ်ဘာသာဝင်ယောက်ျားကိုမဆို ယူခွင့်ရှိတယ်။ ဘာသာခြားကို ယူခဲ့ရင်လည်း တရားဝင်လင်မယားမြောက်တယ်လို့ သတ်မှတ်ခဲ့ကြတယ်။ မြန်မာလူမျိုးအ တွက် လင်ခန်းမယားခန်းမြောက်ဖို့ စာချုပ်စာတမ်းမလိုဘူး။ အခမ်းအနားမလိုဘူး။ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းမရှိဘူး။ အရှေ့ (၇)အိမ်၊ အနောက် (၇)အိမ်က လူတွေက ဒီလူနဲ့ ဒီမိန်းမကို လင်မယားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုရင် လင်မယားမြောက်သွား တာပဲ။ သူတို့နှစ်ဦးသဘောတူ ပေါင်းသင်းကြရင် လင်မယားမြောက်တယ်လို့ သတ်မှတ်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဘာသာခြား ယောက်ျား တွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းကလေးတွေနဲ့ ပေါင်းဖက်လာခဲ့ကြတယ်။
(က) ဒီလို ဘာသာခြားယောက်ျားနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းမများ ပေါင်းဖက်ခြင်းကို ရှေးမြန်မာမင်းများလက်ထက်က ခွင့်ပြုခဲ့ တယ်။ သူတို့ရဲ့ အမွေခန်း စတဲ့ကိစ္စတွေကို မြန်မာဓမ္မသတ်များအရ အဆုံးအဖြတ်ပေးတယ်။ Law of the Place of Contract (Lex Loci Contractus) သဘောတူ ပေါင်းသင်းရာအရပ်ဒေသ တရားဥပဒေအတိုင်း လိုက်နာရတယ်။
(ခ) အင်္ဂလိပ်က (၁၈၂၃၊ ၁၈၅၂၊ ၁၈၈၅) မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်။ အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ရောက်တဲ့ ဒေသက တရားရုံးတွေမှာ ပစ္စည်းခွဲဝေရေး၊ အမွေဆက်ခံရေး၊ သားသမီး တရားဝင်/မ၀င် ပြဿနာပေါ်တယ်။ အင်္ဂလိပ်တရားရုံးတွေမှာ ဘာသာခြားယောက်ျားတွေ အကြောင်းပြချက်က သူတို့ဘာသာ (ခရစ်ယာန်၊ ဟိန္ဒူ၊ မဟာဗေဒင်) က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းမကို ယူခွင့် မရှိဘူးတဲ့၊ ယူခဲ့ရင်လဲ တရားမ၀င်ဘူးတဲ့၊ မွေးလာတဲ့ ကလေးတွေဟာလည်း ဒီယောက်ျားရဲ့ တရားဝင်ကလေးတွေ မဟုတ်ဘူးတဲ့၊ မိန်းမနဲ့ကလေးတွေဟာ ဘာသာခြားလင်ရဲ့အမွေကို မဆက်ခံနိုင်ဘူးတဲ့။ ဒါက သူတို့ရဲ့ ဘာသာခြား တရားဥပဒေ ပြဌာန်းချက်တဲ့။ အင်္ဂလိပ်ရုံးတွေက ဘာသာခြားလင်ရဲ့ ဥပဒေအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။
ဥပမာ ။ ခရစ်ယာန် ယောက်ျားနဲ့ယူခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင် မိန်းမဟာ ကလေး (၈)ယောက်ရသော်လည်း လက်ထပ်စဉ်က ခရစ်ယာန် ဘာသာရေး အခမ်းအနားမလုပ်ခဲ့လို့ မယားအရာမရောက်ဘူးတဲ့။
ဟိန္ဒူ ယောက်ျားယူတဲ့ မိန်းကလေးဟာလဲ (၈)နှစ် (၁၀)နှစ်ကြာ ပေါင်းခဲ့သော်လည်း ဟိန္ဒူမင်္ဂလာ အခမ်းအနား မလုပ်ခဲ့ လို့ တရားဝင်မယားအရာ မရောက်ဘူးတဲ့။ အမွေမရထိုက်ဘူးတဲ့။
မဟာမေဒင် ယောက်ျားကလည်း သူ့ဘာသာရေးဥပဒေက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မိန်းမကို ယူခွင့်မရှိဘူးတဲ့။ မယားဟာ တရား မ၀င်ဘူးတဲ့။ ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မိန်းမများမှာ အလွန်နစ်နာခဲ့ကြရတယ်။ ဒါကတော့ အင်္ဂလိပ်တို့ရဲ့ (Choice of law) ဥပဒေရွေးချယ်မှုစနစ်ကြောင့် ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။
ဒါကြောင့် လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် ၁၉၅၄ ခုနှစ်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းမများမှာ အထူးထိမ်းမြားမှုနဲ့ အမွေဆက်ခံမှု အက်ဥပဒေဆိုတာကို (မြန်မာဘာသာစကားနဲ့) (၂၃/၄/၁၉၅၄) မှာ ပြဌာန်းလိုက်ပါတယ်။ ဒီပြဌာန်းချက်ကို သာမန်အရပ်သူ/အ ရပ်သားများ သိရှိနာလည်နိုင်အောင် တိုတို၊ ရှင်းရှင်း ကြိုးစားရှင်းပြပါတယ်။ (ပုဒ်မ-၃၁) ခုရှိတယ်။ မြန်မာလို ရေးထားပေမဲ့ သူ့ အတိုင်းဖတ်ရင် နားလည်ရခက်သေးတယ်။
၁၉၅၄-ခုနှစ် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းမများ အထူးထိမ်းမြားမှုနှင့် အမွေဆက်ခံမှု အက်ဥပဒေ (၂၃-၄-၁၉၅၄) ပြဌာန်းရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်။
“ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းမများမှာ အခြားဘာသာခြား ယောက်ျားများနဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ပေါင်းသင်းနေထိုင်ပြီး သားသမီး တစ်ကျိပ်ပင် ထွန်းကားခဲ့ပေမဲ့ တရားဝင်မယားမဖြစ်ဘဲ၊ အမြောင် ၊ အပျော်မယားအဆင့်နဲ့သာ တင်းတိမ်ခဲ့ရတယ်။ လူမှုရေး၊ စီးပွား ရေး စတဲ့ အဘက်ဘက်မှာ နစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရလို့ သူတို့အခွင့်အရေးကို အကာအကွယ်ပေးရန်၊ ဒီအက်ဥပဒေကို ပြဌာန်းသွားခဲ့ရခြင်း ဖြစ်တယ်။” (ဒေါ်စောနှင့် ကွယ်လွန်သူ အီးအမ်မက်ထွန်းပစ္စည်းကိစ္စ) ၁၉၆၆-မတစ-၈၁
ဥပဒေပါ အရေးကြီးသော ပြဌာန်းချက်များ
ပုဒ်မ (၂)၊ ပုဒ်မ (၄-၂၀) (၁၈) (၂၄) (၂၅-၂၆) (၅)
ပုဒ်မ (၂) (က) ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မိန်းမအဓိပ္ပါယ် ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်သည့်အပြင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်သော မိန်းမ (သို့) ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သော မိဘတို့မှ မွေးဖွားသော မိန်းမကိုဆိုလိုသည်။
ပုဒ်မ (၄) ဘာသာခြားယောက်ျားရဲ့ ဥပဒေမှာ ဘယ်လိုပါပါ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းမနဲ့ ဘာသာခြားလင်ယောက်ျားအပေါ် ဒီဥပဒေအာဏာ သက်ရောက်တယ်။ ဘာသာခြားရဲ့ ဥပဒေများကို မစဉ်းစားရဘူး။
ပုဒ်မ (၂၀) မှတ်ယူချက် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မိန်းမနဲ့ ဘာသာခြားယောက်ျားတို့ ပေါင်းဖက်နေထိုင် ပြုမူကြပုံဟာ (မြန်မာလူမျိုးချည်း ဖြစ်ခဲ့ရင်) လင်မယားအရာမြောက်တယ်ဆိုရင်၊ ထိုသူနှစ်ယောက်ဟာ (ပေါင်းဖက်စကပင်) ဤဥပဒေအရ ထိမ်းမြားခဲ့ကြတယ်လို့ မှတ်ယူတယ်။ ဘယ်အခမ်းအနား၊ စာချုပ်စာတမ်းမှ မလိုတော့ဘူး။ သူတို့ဟာ တရားဝင်လင်မယားမြောက်တယ်။ (အေးရော၊ ပြတ်ရော)
ပုဒ်မ (၂၇) ဒီလင်မယားနှစ်ဦးမှ မွေးဖွားတဲ့ သားသမီးများအားလုံး တရားဝင် သားသမီးများဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူတယ်။
ပုဒ်မ (၂၄) ထိုသူတို့ရဲ့ ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကိစ္စအားလုံးဟာ သူတို့နဲ့ သူတို့မိသားစုအားလုံးကို (ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာလူမျိုးများ ဖြစ်သကဲ့သို့) မြန်မာဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ရမယ်။
ပုဒ်မ (၂၅-၂၆) လူတို့ရဲ့ လင်မယားကွာရှင်းမှု၊ ပစ္စည်းခွဲဝေမှု၊ သားသမီးထိန်းသိမ်းမှု၊ အမွေဆက်ခံမှု ကိစ္စအားလုံးဟာ (မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဖြစ်သကဲ့သို့) မြန်မာဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေအရ ဆုံးဖြတ်ရမယ်။
ပုဒ်မ-၅ ထိမ်းမြားလိုလျှင် ထိမ်းမြားမှုနည်းလမ်း
(က) ဘာသာခြားယောက်ျားဟာ လူပျိုဘော်ဝင်ရမယ်။
(ခ) မိန်းမဟာ (၁၄)နှစ်ပြည့်ပြီး ဖြစ်ရမယ်။
(ဂ) နှစ်ဦးစလုံး ရူးသွပ်သူ မဖြစ်စေရ။
(ဃ) မိန်းမအသက် (၂၀)မပြည့်သေးပါက မိဘအုပ်ထိန်းသူ သဘောတူညီရမယ်။
(င) မိန်းမမှာ မပြတ်စဲသေးတဲ့ လင်ယောက်ျား မရှိစေရ။
(အတိုမှတ် – ၁၄ နှစ်ပြည့်သူ၊ မရူးသူ၊ သဘောတူမိဘ ၊ လင်မရှိရ)
ထိမ်းမြားလိုသူများဟာ ထိမ်းမြားမှု မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနဲ့အညီ ထိမ်းမြားနိုင်တယ်။ မှတ်ပုံတင် အရာရှိများအဖြစ် တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်တရားရေးဦးစီးမှူးများ၊ ခရိုင်တရားသူကြီးများ၊ မြို့နယ်တရားသူကြီးများကို (၆.၆.၂၀၁၁) နေ့စွဲပါ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ချုပ် ကြေငြာချက်အမှတ် (၁၆၉/၁၁) အရ ခန့်အပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို မထိမ်းမြားဘဲ အတူပေါင်းသင်းနေထိုင်ရင်လည်း တရားဝင် လင်မယားလို့ ဒီဥပဒေက မှတ်ယူတယ်။ ပုဒ်မ ၂၀(၄)
ပုဒ်မ – ၂၀ ခြွင်းချက် (ကွာချင်ရင်နည်းလမ်း)
ဘာသာခြား ယောက်ျားဟာ သူ့ရဲ့ဘာသာရေး အကြောင်းကြောင့် သူ့ရဲ့မိန်းမကို ကွာရှင်းလိုလျှင်၊ စွန့်ပစ်လျှင်၊ ရက် စက်သည့် အပြုအမူများအားဖြင့် စိတ်ဆင်းရဲအောင်ပြုလျှင် –
(၁) ထိုယောက်ျားသည် နှစ်ဦးပိုင်ပစ္စည်းများမှ မိမိရထိုက်သော ပစ္စည်းကို စွန့်ရသည့်အပြင် မိန်းမအား လျော်ကြေး ပေးရမည်။ (ကွာချင်ရင် အ၀တ်တစ်ထည်ကိုယ်တစ်ခု လန်ကွတ်တီနဲ့ အိမ်ပေါ်ကဆင်းရမယ်)
(၂) ထိုမိန်းမက သားသမီးအားလုံးကို ထိန်းသိမ်းခွင့်ရရှိသည်။
(၃) ထိုသူသည် အရွယ်မရောက်သေးသော ကလေးများအတွက် ကလေးစရိတ်ပေးရမည်တဲ့။
(အတိုမှတ် – ဝေစုစွန့်၊ လျှော်ကြေးပေး၊ သားသမီး၊ စရိတ်ပေး။)
ဒီ ၁၉၅၄ အထူးအက်ဥပဒေဟာ ထက်မြက်ပြီးထူးခြားပြတ်သားတယ်။ ဒီဥပဒေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းကလေးများကို အထူးအခွင့်အရေး ပေးထားတာမဟုတ်ဘူး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အချင်းချင်း အိမ်ထောင်ပြုလျှင် အမျိုးသမီးရထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေး များရရှိတယ်။ မြန်မာမင်းများ လက်ထက်ကတည်းက ဘာသာခြားနဲ့ လက်ထပ်ရင်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမျိုးသ မီးများ ရရှိခဲ့တဲ့ အခွင့်အရေးများဖြစ်တယ်။ အင်္ဂလိပ်လက်ထက်မှ (၁၈၂၃-၁၉၅၄)ထိ ဒီအခွင့်အရေးတွေ လက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ ဒီ အခွင့် အရေးကို (၁၉၅၄) အထူး အက်ဥပဒေက ပြန်လည်အသိအမှတ်ပြုပေးခဲ့တာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုဖြူ ။ ။ (၁၉၅၄) အထူးအက်ဥပဒေက ဘာသာခြားယောက်ျားတွေကို သတိပေးလိုက်တာပေါ့နော်။
ယူတီကေ ။ ။ (၁) ဒီဥပဒေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းမများကို ဘာသာခြားနဲ့ လက်ထပ်ဖို့ “အားပေးတဲ့ ဥပဒေ မဟုတ်ဘူး”။
(၂) အကယ်၍ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဘာသာခြားနဲ့ ပေါင်းသင်းမိခဲ့သော် မိန်းကလေးရဲ့ အခွင့်အရေးကို “ကာကွယ်ပေးထားတဲ့ ဥပဒေ” မျှသာဖြစ်တယ်။
(၃) ဒီအက်ဥပဒေရဲ့ ပြဌာန်းချက်ကို ဘာသာခြား ယောက်ျားများလည်း သိထားရမယ်။ ဗုဒ္ဓဘာ သာဝင် မိန်းကလေးကို ယူမယ်ဆိုရင် မိမိတို့ရဲ့ ဘာသာခြားဥပဒေ၊ ဓလေ့ထုံးစံတွေကို လုံးဝရိုက်ချိုး၊ ဖျက်သိမ်း၊ စွန့်လွှတ်ပစ်နိုင် မှ ယူခွင့်ရှိတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းကလေးလိုက်နာရတဲ့ မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေကို လိုက်နာရမယ်ဆိုတာ (ဂျွန်) (အဗ္ဗဒူ) (အပ္ပနား) တို့ကို ပြတ်ပြတ်သားသား သတိပေးလိုက်တဲ့ ဥပဒေဖြစ်ပါကြောင်း။
၁၉၅၄ အထူးအက်ဥပဒေ- ဒါဖတ်ပြီး.. ယောနိစောင့်ဥပဒေထုတ်မယ့်သူတွေ.. ရှိပြီးဥပဒေတွေကို.. သေသေချာချာမှ သိကြရဲ့လားထင်မိတယ်..။
ကြည့်ရတာ.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. အာဏာပါဝါ ပြမှာပဲ.. ပြမှာပဲလားမသိ…။
Texas Leads 17 States Suing Obama Administration Over …
NBCNews.com-Dec 3, 2014
But the Washington Post isn’t as sure. “[A]ngry with the president and encouraged by Sen. Ted Cruz (R-Texas) and other popular conservative …
Seventeen states, led by Texas Attorney General and Governor-elect Greg Abbott, are suing the Obama administration over the president’s recent executive actions on immigration.
Inastatement, Abbott said the president’s unilateral action to offer deportation relief to millions of undocumented immigrants “tramples the U.S. Constitution’s Take Care Clause and federal law.”
သမ္မတကို.. ပြည်နယ်၁၇ခုက.. စူး(တရားစွဲ)ပြီဟေ့…။ လ၀က ကိစ္စနဲ့တဲ့..။
ကွန်ဂရက်လွတ်တော်ကလည်း.. ကျမ်းမာရေးစောင့်လျှောက်မှုဥပဒေပြုတာနဲ့ပါတ်သက်ပြီး.. တရားစွဲဖို့ပြင်ဆင်နေကြောင်း…
အမျိုးသမီးတွေရယ်လို့တော့ဟုတ်ပါဘူး ဒီဥပဒေ မကောင်းတဲ့သူခံလေ
မကောင်းတဲ့မိန်းမတွေဒဏ်ကိုခံနေရတဲ့ ယောက်ျားတွေလဲ ကြိုဆိုကြမှာဘာ
အထက်ကဆိုသလို မကောင်းတဲ့သူက ယောက်ျားချည်းပဲမှ မဟုတ်တာရယ်
အဲ့လိုနေရာမှာမိန်းမတွေစည်းကမ်းမဲ့ရင် ယောက်ျားများထက် သာ လွန် ဆိုး ပဲ …..
ကျနော်တော့ သဘောကျတယ် မမှီက မဖစ်နိုင်ဘူးပြောလို့တောင် နဲနဲစိတ်ပိန်သွားတယ်
မဖြစ်​နိုင်​ဘူးလို့ ​ပြောတာ ဟုတ်​ပါဘူး ချာတူးရယ်​။ ဖြစ်​ခဲ့ရင်​​သော်​မှ အရှုပ်​​တွေ အ​တော်​ရှင်းရမယ်​တဲ့။ အရင်​တုန်းက စီရင်​ထုံး​တွေက လူ့တရပ်​​လောက်​ရှိသတဲ့။ ဒါ​တွေကို ​ဖောက်​ထွက်​ရဦးမယ်​တဲ့ ။ အဖက်​ဖက်​က စနစ်​တကျ​သေချာမှ အဲ့လိုမှ မဟုတ်​ရင်​ လုပ်​တဲ့သူက သမိုင်းတရားခံ ဖြစ်​နိုင်​သတဲ့။ ကိုယ်​က ဥပ​ဒေ အ​ကြောင်းနားမလည်​​တော့ ပါပါ ရှင်းပြ​​ပေမဲ့ ​ဝေေ ဝ ဝါးဝါးရယ်​။ ဟိုတယ်​​တွေ ပဲ သွားရင်​​တော့ မ​ပြောတတ်​ဘူး။ အဲ့လိုမဟုတ်​ပဲ နှစ်​ဦးသ​ဘောတူ လက်​မထပ်​ပဲ အတူ​နေရင်​လည်း ပတ်​ဝ န်းကျင်​က တိုင်​လို့ရသတဲ့။ ပါပါတို့က​တော့ ဥပ​ဒေသမားမို့ နားလည်​တယ်​ ကိုယ်​​တွေက အစိမ်းသက်​သက်​မို့ သိဘူး ဥပ​ဒေ ကျွမ်းကျင်​တာမှ ပါပါ့လက်​ထက်​မှာ စီရင်​ထုံး​တွေ အ​တော်​ထွက်​ခဲ့တာတဲ့။ ကြွားတာ။
အဖမြန်မာပြည်ခမြာ.. နှစ်၁၀၀၀ ထဲအကြိမ်ကြိမ်ပြခဲ့ဖူးပြီ..
ပျူပျက်..။ ပုဂံပျက်…။ အင်းဝပျက်၊ တောင်ငူပျက်..။ ကုန်းဘောင်ပျက်..။
သတ္တ၀ါတွေသနားလို့ဆိုပြီး.. ရေမြုတ်ဗုံးစမ်းတာကန့်ကွက်တော်မူသမို့.. မင်းနေပြည်ကျ..။
နွားမေတ္တာစာဘွဲ့ကြောင့်.. ကလေးတွေ.. နွားနို့.. အမဲသားငတ်ပြီး.. ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျ..။
အင်္ဂလိပ် ကိုလိုနီလက်အောက်မှာပဲ.. အတိုးတက်ဆုံးနဲ့အတည်ငြိမ်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပ..။
((((( တို့မြန်မာနိုင်ငံကို ဗုဒ္ဓဘာသာ ရောက်တာနှစ်၂၀၀၀ရှိပြီ။ ခရစ်ယာန်တွေ၊ အစ္စလာမ်တွေ ရောက်လာတာက အင်္ဂလိပ်ဝင်မှ ရောက်လာတာ။ အဲဒီနောက်မှ ရောက်လာတာ ဆိုတော့ နှစ်တစ်ထောင်မပြောနဲ့ တစ်ရာ တစ်ရာ့ငါးဆယ်လောက်ပဲ ရှိသေးတယ်။ ဒါကို ပြောရမယ်ဆိုရင် ဗုဒ္ဓဘာသာက အိမ်ရှင်နိုင်ငံပါ။ အဲဒီလို Invade လုပ်ပြီးတော့ ဝင်ရောက်လာကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ Migrate လုပ်ပြီးတော့ ဝင်ရောက် လာကြတဲ့ လူတွေက ဧည့်သည်တွေ။ )))))- သီတဂူ ဆရာတော်ဘုရားကြီးဒေါက်တာအရှင်ဉာဏိဿ
ထောင် ခုနစ်နှစ် ဥပဒေကြီးထုတ်လိုက်တာ မာမီတို့စီးပွါးရေးကို တုတ်နဲ့ထိုးပြီ…
အဲဂလို ထုတ်လိုက်တော့ တော်ရုံမေတ္တာနဲ့ လက်ထပ်ဖို့ နောက်တွန့်ပြီး…
LT ယဉ်ကျေးမှု အကြီးအကျယ် ထွန်းကားလာမည်ဖြစ်ပါကြောင်း…
အနာဂတ်အတွက် အကောင်းဆုံးစီးပွါးရေးမှာ အချိန်ပိုင်းတည်းခိုခန်းဖွင့်တာ ဖြစ်ပါကြောင်း…
လက်ရှိ အိမ်ထောင်ဘက်ကို ရာထူးတိုးပေးလိုသူများ လက်သွက်ကြစေလိုကြောင်း…
ရှိပြီးသားဥပဒေကို အာဏာသက်ရောက်အောင်မလုပ်တတ်တဲ့… ပညာယှိတွေ
အဲဒီ စာပိုဒ်တွေထဲက… ”တစ်”တွေကျတော့.. ”စ်” မဖြုတ်ဘူးလား .သဂျီး
Post by Than Htut.
.LT ထွန်းကားလည်း အရေးမကြီးဘူး။ ဒီမိုအစစ်ကိုလိုချင်ရင် လူသားချင်း အရှက်ခွဲခြင်း၊ နှိပ်ကွပ်ခြင်း ကင်းရပါမယ်။ အကျဉ်းသားကိုတောင် သံခြေချင်းခတ်ခွင့် မရှိဘူး။ ဒုက္ခိတတွေကို အရှက်ခွဲခြင်း၊ နှိပ်ကွပ်ခြင်း မရှိရဘူး။ လူသားအားလုံး တန်းတူရည်မျှဖြစ် ခြင်းသာ ဒီမိုရဲ့ အနှစ်သာရလာမယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ရှိလာနိုင်ပေမယ့် ပင်မ တရားဥပဒေ တရားမျှတရမယ်။ တစ်လင်တစ်မယား စနစ်ကို ကြိုဆိုထောက်ခံပါတယ်။ ထောင်ဒဏ်ကိုတော့ များတယ်ထင်မိ။ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်းကိုပဲ သွားသင့်တာ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် နောက်မယားဆိုတာ အဓိကက ဒါကိုချိုင်တာ။ တရားမ၀င် မယားသတ်မှတ်ပြီး ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့် မပေး၊ အမွေဆက်ခံပိုင်ခွင့် မပေးရင်ကို တော်တော်ငြိမ်သွားလိမ့်မယ်။ မိန်းမထု အိနြေ္ဒ ရသွားလိမ့်မယ်။ ကော့ကော်ကံကားတွေ ကျသွားလိမ့်မယ်။ စောင့်ထိန်းတဲ့မိန်းကလေးတွေလည်း ပိုတန်ဖိုးရှိပြီး LT နေတဲ့ မိန်းကလေးတွေလည်း သိက္ခာကျတာမျိုး လျော့သွားလိမ့်မယ်။ ဒါကြီးက မြန်မာပြည် လူမှုအဆောက်အဦ တည်ဆောက်မှုရဲ့ အခြေခံအချက်ကြီး။ ဒါကြိးကို ဖြိုနိုင်ပါစေ၊ အမျိုးသမီးကို အမှန်တကယ် တန်ဖိုးထားတဲ့ တိုင်းပြည်ဖြစ်လာပါစေ။ အမျိုးသမီးကို တန်ဖိုးမထားတဲ့ အာရပ်ကမ္ဘာ ဟာ တဘုန်းဘုန်း ပြိုလဲနေပြီ။ ဒို့ အမျိုးသမီးတွေ သတ္တိရှိရှိနဲ့ တိုက်ပွဲဝင်လိုက်ကြစမ်းပါ။ အသေးအမွှား ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို ကြောက်စရာ မလိုဘူး။
December 10, 2014 “ICH” – “Thiscantbehappening” – I’m going to say it: I am ashamed to beaUS citizen. This doesn’t come easily, because having lived abroad and seen some pretty nasty places in my time, I know there arealot of great things about this country, andalot of great people who live here, but lately, I’ve reached the conclusion that the US isasick and twisted country, in which the bad far outweighs the good.
အမေရိကန်ဖြစ်ခြင်း၌ အရှက်ရခြင်း ဤ၁၁ချက်…
မြန်မာတွေလည်း ရေးဖို့ကောင်းတယ်… ထင်..။
Fri, 2014-12-12 13:25
No.590 Friday, December 12, 2014
Google Translateတွင် အထောက်အပံ့ ပေးနိုင်မည့် နောက်ထပ် ဘာသာစကား (၁၀)မျိုးကို ထပ်မံထည့်သွင်းပေးလိုက်ကြောင်း Googleက ကြေညာပြီး ယင်းလုပ်ဆောင်မှုကြောင့် ကမ္ဘာ့လူဦးရေ သန်း(၂၀၀)ခန့်သည် မိမိတို့၏ မိခင်ဘာသာ စကားများကို အသုံးပြုပြီး ဘာသာပြန်ဆိုမှုများ လုပ်ဆောင်လာနိုင်မည်ဟု ဆိုသည်။
Google Translateတွင် မြန်မာဘာသာအပြင် ချီချီဝါ (မော်လဝီနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ဒေသများ)၊ မလာဂါစီ (မဒါဂါစကာ)၊ ဆီဆိုသို (လီဆိုသိုနှင့် တောင်အာဖရိက)၊ ကာဇက် (ကာဇက်စတန်)၊ တာဂျက်ခ် (တာဂျစ်ကစ္စတန်)၊ ဥဇဘက် (ဥဇဘက်ကစ္စတန်)၊ မာလာယာလမ် (အိန္ဒိယ)၊ ဆင်ဟာလာ (သီရိလင်္ကာ)နှင့် ဆူဒန်နီစီ (ဂျာဗားကျွန်းနှင့် အင်ဒိုနီးရှား)တို့ကိုပါ ဖြည့်စွက် ထည့်သွင်းပေးလိုက်သည်။
အရမ်းကောင်းတဲ့ ဂိုဂယ်က မြန်မာစာဘယ်လိုသုံးမလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်း ရှင်းပြထားတာ
လုံးဝသတင်းကောင်းတစ်ခုပေးချင်ပါတယ် … အခုတော့ အထားအသိုလေး အနည်းငယ်ပြင်ပေးရင် ဘယ်ကားကိုမဆို မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ ကြည့်လို့ရပါပြီ … ကျနော်တို့အနေနဲ့ အခုအချိန်မှာ အတိအကျ ဘာသာပြန်ဆိုမှု့မဖြစ်နိုင်သေးပေမယ့် အနည်းငယ်လေး ပြင်ပေးယုံမျှဖြင့် မည်သည့်ဘာသာဖြင့် တင်ထားသည့် video ကိုမဆို ဘာသာပြန်နိုင်ပါပြီဖြစ်ပါတယ် .
လုပ်နည်းလေးကို အနည်းငယ်ပြောလိုပါတယ် . ပထမဆုံးအနေဖြင့် မိမိကြည့်ချင်သည့် စာဖိုင်ကို google ကနေ ရှာပါ .. Notepad နဲ့ဖွင့်လိုက်ပါ. ပြီးရင်တော့ စာတွေကို ကူးလိုက်ပါ. ကူးတဲ့နေရာမှာ တစ်ခါကူးရင် အကြောင်းရေ 100 လောက်ပဲကူးတာ အကောင်းဆုံးပါ. 1000 ကျော်လောက်ကို translate လုပ်တဲ့အခါမှာ ကြာတတ်လို့ပါ .. ကူးပြီးရင်တော့ … ကွန်ပျူတာထဲမှာ မသုံးမဖြစ် Google chrome ကို သုံးရပါလိမ့်မယ် .
Chrome Browser က translate လုပ်တာ ပိုမြန်လို့ပါ .
http://www.translate.google.com ကို ၀င်လိုက်ပါ … ပြီးရင်
ဘယ်ဖက်ခြမ်းအကွက်မှာ အားလုံးကို paste လုပ်လိုက်ပြီး ညာဖက်ခြမ်းအကွက်မှာ Myanmar(burmese) ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ. ပြီးရင်တော့ translate ကို နှိပ်လိုက်ပါ ..
ဒါဆိုရင် အားလုံး unicode နဲ့ တစ်ခါတည်း ဘာသာပြန်ပြီးသားထွက်လာပါလိမ့်မယ်. အဲ့ဖိုင်ကို ကျနော်တို့ သုံးနေတဲ့ zawgyi နဲ့ ပြန်ပြောင်းဖို့ကတော့
Unicode to zawgyi converter ကို သုံးရပါလိမ့်မယ်. အဲ့ converter ကိုတော့
အဲ့ကနေ၀င်ပြီးတော့ translate လုပ်ပြီးရလာတဲ့ မြန်မာ unicode နဲ့ စာတွေအားလုံးကို ထည့်ပြီး convert လုပ်လိုက်ပါ. ဒါဆိုရင်zawgyi font နဲ့ ပြန်ထားပြီးတဲ့စာထွက်လာပါလိမ့်မယ် . စာလုံးအထားအသိုကိုတော့ မိမိဟာမိမိ အဆင်ပြေသလိုလေး ပြင်ပေးလိုက်ရင် video ကားတစ်ကားကို အချိန်ခဏလေးနဲ့ ဘာသာပြန်ပြီး ကြည့်နိုင်ပါလိမ့်မယ် .. အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ် ..
မူရင်း Nyi Nay Min
သန်းရွှေ သေရင် သူတို့ရဲ့ Power Center Shift ဖြစ်မယ်။ သူဟာ အာဏာ ဗဟို ချက်မ( power center ) ဖြစ်တယ်။ သူသေရင် ဒီဗဟိုငယ်တွေအများကြီးဖြစ်သွားမယ်။ အာဏာဟာ Out of Equilibrium ဖြစ်မယ်။
အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့သဘောသဘာဝ ကိုက အတက်အကျ
သံသယာလည်စနစ်ဖြစ်တယ်။ ဒီမိုကရေစီစနစ်လုို့ တလျောက်လုံး ကြောင်လိမ်လှေကားလို့ တိုးတက်လာတဲ့စနစ်မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ တက်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကျရမယ်။
ကမ္ဘာ့သမိုင်း မှာ အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးတွေဟာ ထာဝရမတည်မြဲခဲ့ဘူး။ မြန်မာသမိုင်းမှာ မင်းဆိုးမင်းညစ် စနစ်တွေဟာ အဓွန့် မရှည်ခဲ့ဘူး။ သန်းရွှေ သေပြီးရင် နောက်တယောက်လာကောင်းလာမယ်။ ဒါပေမဲ့ ကြာကြာမခံတော့ဘူး။ ပြိုမယ်လို့ဟောကိန်းထုတ်ခြင်ပါတယ်။ အားစိုက်ကြိုးပန်းကြလုို့တပ်လှန့် ခြင်ပါတယ်။ ယူဂုိုစလားဗီးယားမှာ မီလိုရှစ်ဗီစ် အာဏာ ပြုတ်ခါနီးမှာ ဗီလိုရှစ်ဗစ် သွား ပြီ ( Milosevic has finished ) လုို့လူထုကြားမှာ ပြောနေကြတယ်။ လူတွေက လက်မခံတော့ဘူးဆိုတာကို ပြသတာပါပဲ။ လူထုရဲ့ဝါဒ ဖြန့် ချီ မှုက အထိရောက်ဆုံးပါ။
အခုလဲ သန်းရွှေသြေ့ပီဆိုတဲ့သတင်းတွေက နေစဉ်လုို့ ထွက်နေတယ်။
ဦးနေ၀င်း သေတယ်။ စောမောင်တက်တယ်။ စောမောင်သေတယ်။ သန်းရွေ တက်တယ်။ တယောက်ပြီးတယောက်တက်လာတယ်။ စစ်ဝါဒ ခုိုင်မြဲနေတယ်လုို့ မယူဆစေချင်ဘူး။ သူတို့ အားလုံးဟာ မတည်ြိမ် မှုတွေ ၊ ဖိအားပေးခံရမှုတွေ ကိုသာရင်ဆိုင်သွားခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။
အာဏာရှစ်စနစ်ရဲ့သဘာဝ တခုက တယောက်ကိုတယောက်ယုံကြည်မှုမရှိကြပါဘူး။
လက်ဦးမှုရယူကြတာက အာဏာရရေးအတွက် နည်းလမ်းပါ။ ဒီမိုကရေစီစနစ်မဟုတ်ပါဘူး။
အများစု ဆန္ဒတို့ ဘာတို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဂျင်ဂျစ်ခန် လဲ သူညီအကိုချင်းသတ်ရတယ်။ ကူပလိုင်းခန်ကလဲ သူညီကိုသတ်ခဲ့ရတာပါပဲ။
ဦးသန်းရွှေဟာ ဦးနေ၀င်းကို လုပ်ကြံခဲ့တယ်။ ဦးစောမောင်ကိုဆေးထိုးသတ်ခဲ့တယ်။ ဦးစိန်လွင်ကို ဆေးကုခွင့်ပိတ်ပြီး သတ်လုိုက်တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်တင်ဦးကို ဟယ်လီကော်ပတာ မှာဗုံးထောင်ပြီး သတ်ခဲ့ရတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ အညတရ ဂူဗိမန် ပွဲဆိုတာက ဦးသန်းရွှေ နိပ်စက်လိုက်တဲ့ အာဏာလက်မဲ့ တွေ ရဲ့စု ပွဲဖြစ်တယ်။ စစ်တပ်ကို အမွေ ဆက်ခံနိင်ဖုို့ အတွက်
အာဏာလက်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ အုပ်စုတွေရဲ့ ပထမ ခြေလှမ်းတခုဖြစ်ပါတယ်။ ဦးသန်းရွေအုပ်စုကို မကျေနပ်တဲ့ အင်အားစုတွေ တခုပြီးတခုတိုးပွားလာတဲ့သဘောပါပဲ။ အခု သူအလှည့်လာပါတော့မယ်။
ဦးစောမောင် ရူးသွားပြီ၊ မောင်အေး အရက်သမားဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့ သတင်းတွေကို တချိန်က ဗို်လ်ချုပ်ခင်ညွန့်ထောက်လှမ်းရေးတွေက မှန် မှန်လေး ဖြန့် ပေးခဲ့တယ်။ အခု ဦးသန်းရွှေ သေပြီဆိုတဲ့သတင်းက နေစဉ်လုို ထွက်နေပါတယ်။ ဘယ်သူပဲဖြန့် ဖြန် ဦးသန်းရွှေ သေတာဟာ တိုင်းပြည်အတွက်ကောင်းတဲ့ သဘောပါပဲ။
မြန်မာစစ်ဝါဒဟာ ခေတ်နောက်ကျတဲ့အတွေးအခေါ်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတာ၊ ပညာရေးအသိညဏ်အလွန် နိမ့်ကျတယ်။ ယဉ်ကျေးမှုနိမ့်တယ်။ ဒါကြောင့် ဒီစနစ် ဆိုးဝါ
မင်းဆက် ပေါင်းများစွာ ခံမဲ့ စနစ်မဟုတ်ဘူး။ စစ်တပ်ဟာ တဖြးတဖြေး အရည်အသွေး ကျဆင်းနေတယ်။ ဒါတွေကို ပြုပြင်ဖါထေးဖုို့အချိ်န် မရှိတော့ဘူး လုို ဖြစ်လာပါပြီ။
မြန်မာ ပြည်ရဲအခြေအနေဟာ အမေရိကန်၊ ဥေ၇ာပ မပြောနဲ့ 
မြန်မာ ပြည်ကိုကယ်တင်နိင်တာကတော့ အန္တတ စွမ်းပကားရှင်ဖြစ်တဲ့ ပြည်သူလူထုကြီးပဲဖြစ်တယ်။
အားစိုက် ရုမ်း လိုက်ကြပါစို့။
starhub ကသဂျီးမင်းကက်လား အိုက်ဘက်ကအင်တာနက်မသုံးလဲ
ဒီဘက်ဝက်စိုက်ကနေတန်းပီး မက်စိပို့လို့ရဒယ်ဆိုတာလေ အာ့မျိုးလား
အမှန်ကလေ အဲလာ ကျနော် က အာဂ တင်ထားတဲ့ ပုံကို စကရင်ရှော့ဖမ်းပြီး
သူက ရှယ်ရင်း သူများကရှယ်ရင်း စတားဟပ် ပါတဲ့ ပုံတွေ ပြန့်ကုန်တာ။
အဲဒီဘက်က စတားဟပ် ဝက်ဆိုက်ကနေ
စလုံး စတားဟပ် နံပတ်ကို မတ်စေ့ ပို့လို့ ရတယ်။
အော် ! ဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံဟုခေါ်သည်
Nay Myo Han
ဩစတြေးရီးယား နိုင်ငံ၊ ဆစ်ဒနီမြို့ က ကော်ဖီဆိုင် မှာ အကြမ်းဖက်သမား ဝင်ခဲ့တဲ့ သတင်း ကို အားလုံး သိပြီးလောက်ပါပြီ။
နောက်ဆုံး ကွန်မန်ဒို တွေ ဝင်လိုက်ပြီး အဲဒီ အကြမ်းဖက်သမား အပါအဝင် တစ်ခြား အပြစ်မဲ့ လူ နှစ်ဦး အသက်ဆုံး ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ အကြမ်းဖက်သမား ဟာ အစ္စလာမ် အစွန်းရောက် ပါ။
ပြောချင်တာက အဲဒီ သတင်း ထက် နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်လာတဲ့ သတင်း ကို ပါဘဲ။
အစ္စလာမ် အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သမား သတင်း ထွက်လာချိန် အဲဒီ နိုင်ငံထဲ က မူစလင် တွေ မှာ အနေကြပ်ခဲ့တယ်။
ရထား ပေါ်က ဆင်းခါနီး ခေါင်းစည်းထား တဲ့ သူ့ပုဝါလေး ကို အသာလေးချွတ် ပြီး ဆင်းသွား တဲ့ မူဆလင်အမျိုးသမီး ရဲ့ နောက်ကို လူဖြူ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် က ပြေးလိုက်ပြီး ပြောခဲ့တယ်။
ခေါင်းစည်းပြန်ဝတ် လိုက်ပါ။ မင်း နဲ့ ငါ လိုက်လျှောက်ပေးပါ့မယ်။ တဲ့။
အမျိုးသမီး ခမျာ သူ့ ကို ဖက်ပြီး ငိုခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ သူ့ဟာသူဘဲ တစ်ယောက် ထဲ လျှောက်သွားခဲ့ တယ်။
အဲဒါ ကို စိတ်မကောင်း ဖြစ်ပြီး Facebook ထဲ Post သူရေးခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်း “I’ll ride with you” ဆိုတဲ့ hashtag စာတန်း နဲ့ မင်းတို့ နဲ့ အတူ ငါတို့ ရှိတယ် ဆိုပြီး အပြစ်ကင်းတဲ့ မူစလင် များ ကို အားပေး နှစ်သိမ့် တဲ့ စကား တွစ်တာ ထဲ မှာ စလိုက်တယ်။
တစ်ယောက် ထဲ အပြင်ထွက်ဖို့ ကြောက်နေခဲ့ရင် ငါနဲ့ အတူလိုက်ခဲ့ပါ။ လို့ ခေါ်နေကြတယ်။
အခုဆို follower ပေါင်း တစ်သိန်းခွဲ ရှိပြီလို့ ပြောတယ်။
ကျွန်မလဲ သူတို့ နဲ့ အတူ ပူးပေါင်းပါတယ်။
ဘာမှ အပြစ်မရှိတဲ့ အစ္စလာမ် ဘာသာကိုးကွယ်သူ များ အတွက် ပါ။
အားလုံး ဟာ ကံ ကံ ၏ အကြောင်း အကျိုး ကြောင့်လို့ မြင်တတ်ရင်
အပြစ်မရှိ သူ များ အချင်းချင်း ဘာကို အမုန်းပွါး အငြိုးထား သင့်ပါသလဲ။
အခု အပြစ်မရှိဘဲ သေဆုံးခဲ့ တဲ့ သူ တွေ ကို အားနာပါဦး လို့။
တကယ်တော့ အပြစ်ရှိတဲ့ မတရား အကြမ်းဖက်သူ တွေ ကို ဖယ်ပစ်နိုင်ဖို့ နည်း က
အပြစ်မဲ့သူအချင်းချင်း မေတ္တာရှေ့ထား နားလည်မှု ပေးပြီး သွေးစည်းနိုင်ဖို့ဘဲ။
ဒါကို တစ်ဖက်ကလဲ အသိအမှတ်ပြု နိုင်ဖို့လိုမယ်။
ဒီက စပြီးတော့ ကမ္ဘာကြီး ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် HOPE ပါဘဲ။
ဒါဟာ ကမ္ဘာကို အမုန်းတရား နဲ့ အမှောင်ချဖို့ ကြိုးစားသူ အကြမ်းဖက်သမား တွေကို မေတ္တာတရား ပြပြီး စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ ပွဲပါဘဲ။
I am SO PROUD of you, Australia.
မြန်မာပြည်ထဲ က အမုန်းတရား နဲ့ ရန်မီးပွါး စစ်ရေးပြ နေသူများ ဆင်ခြင်သင့်ပြီ။
မြန်မာပြည်မယ်… “ဘက”ပညာရေးစတာ.. ဆယ်စုနှစ် ၂ခုမကရှိပြီလို့…ထင်တယ်..။
အရီးလတ်နဲ့.. စကားချည်းငြင်းနေရတာ.. ဒီတခါတော့ သဘောလည်းတူတာမို့ “I’ll ride with you” ကင်န်ပိန်းပူးပေါင်းမယ်ဆိုတာလေးလည်းပြောချင်လို့ပါ..။
ယူအက်စ်မှာပြောတာနော..။ မြန်မာပြည်မှာတော့.. ကြောက်ကြောက်..
ကိုထင်လင်းဦးအား အာမခံခွင့်မပြုကာ ဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်း။
ယနေ့၁၇- ၁၂ -၂၀၁၄နံနက်ပိုင်း ချောင်းဦးမြို့နယ်တရားရုံးတွင် အမျိုးသား
ဒီမိုကရေစီအဖွဲ.ချုပ် ဗဟို ပြန်ကြားရေးအဖွဲ.၀င်ဟောင်း ကိုထင်လင်းဦး ကို
၂၉၅ ( က )နဲ့တရားစွဲဆိုပါတယ်။
ကိုထင်လင်းဦးမှ အာမခံလျှောက်ထားပါတယ်။ တရားသူကြီးမှ အာမခံ
လျှောက်ထားမှုအား ပယ်ချခဲ့ပြီး အချုပ်ဖြင့်ဆက်လက်တရားရင်ဆိုင်ရန်
သတင်းဓါတ်ပုံ – Soe Moe FB.
နောက်ဆို ကြေးစား စစ်သား မသုံးတော့ဝူးဆိုလားးး
ကြေးစား ကိုယ်တော်တွေပဲ အသုံးချတော့မယ် ဆိုလားးး
ဘယ်သူပြောတာ မြင်မိလိုက်လဲ မသိ။
ဘာလို့ ဒီနှစ်ပိုင်းမှာ မဘသ က အရမ်း (အညှိုး/ရန်လိုမှု/အပြစ်ရှာမှု) အင်အားကြီးလာလဲမသိ။
Myanmar Gazette Jan 2015 #73
“The Interview” to get Christmas screening after all – Sony Pictures Entertainment announced Tuesdayalimited theatrical release of “The Interview” beginning Thursday, putting back into the theaters the comedy that prompted an international incident with North Korea,threats of violence and outrage over its cancelled release. http://ow.ly/2SumNp
ABC News	– ‎28 minutes ago‎
The tables may have turned on North Korea. The reclusive country’s state-run Internet was down “hard” for9hours and 31 minutes today, according to Dyn Research, which monitors the state of the Internet around the globe.
အိုဘားမား နဲ့ ကင်မ် ကို ကြားက ပူတင်း က အရူးလုပ် နေတယ်လို့ နဲနဲလေးများ မတွေးမိဘူးလား။
ကျွန်မ ကတော့ ခပ်ကြောင်ကြောင် တွေးနေတာဘဲ။
ပြောသာပြောတာ..။ ပူတင်တို့ ပိုက်ပိုက်.. ရူဘယ်ငွေခမြာလည်း.. ဇောက်ထိုးကျလာလိုက်တာ… ငရဲပြည်ရောက်တော့မယ်ထင်..။
ဆိုင်ဘာနည်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာကို.. တန်ပြန်ဆိုက်ဘာနည်းနဲ့ချလိုက်ပုံလေးတော့.. ကြိုက်မိသား…။
ဆိုနီ ပြောတာက ရုပ်ရှင်ရုံ တွေက သူတို့ ရုံ တွေ မှာ မပြတော့ဘူး ငြင်းလိုက်လို့ တဲ့။
ဒီတော့ တစ်ခြား နည်း နဲ့ ဖြန့်မယ်ပြောတာဘဲ။
အခုမှ လူတွေ ဆီက attention ပိုရတော့မယ်။
မဟုတ်လဲ cyberwar အစဘဲ။ lol:-)))
See… told you…
BTW that news reminds me the day MG was hacked. lol:-)))))
1) MOST of the IT security people I follow on Twitter do NOT believe North Korea was behind the Sony Hack.
2) Many of the infosec people I’ve read make it clear that the previous attacks you cite were NEVER concretely attributed to the North Korean STATE,
3) Yesterdayastory in the press reported that the Chase Manhattan break-in access point was finally identified. The story mentions that the FBI originally speculated thataRussian group – possibly state-sponsored – was behind it asareaction to US sanctions on Russia. The FBI was later forced to rule that out. Sound familiar?
As for Beitjich’s post, this is one of the more egregious that he has done, for several reasons:
1) First, he is deliberately obfuscated what “attribution” means with his bogus list of multiple “meanings”.
2) Secondly, he recommends that people not even ASK for attribution, as that might entice the US government to institute some sort of “ID schemes”. This is just BS.
3) Third, he recommends Bruce Bennet asa“North Korea expert”, the Rand Corporation associate who consulted with Sony on the Interview movie, and who was responsible for convincing Sony to leave the actual assassination scene in. This man believed that once the DVD of the movie is smuggled into North Korea that it would motivate someone to actually assassinate the NK leader. Bennett isaknown “hawk” on North Korea, and obviouslyalunatic. Given that Beitjich is known to be hawk on China, his recommendation of Bennett throws his credibility completely out the window.
I am sad to see you buy into this NK bullcrap.
ကြည့်ရတာ.. ငတို့အရီးတော်လည်း.. ဟက်ကာတပိုင်းနဲ့တူတယ်..။
အန်အက်စ်အေ – အလက်ဇန္ဒားကြီးက…ဖွဲ့ထားခဲ့တဲ့.. ယူတားပြည်နယ်မှာ.. ထောင်ချီတဲ့ဟက်ကာတွေနဲ့.. လုပ်ထားတဲ့.. ဖက်စစ်လတီကြီး ဘယ်သွားထားမလည်းနော…
ပေးလိုက်ရတဲ့.. Tax တွေ..။
IT Admin ဆိုတော့ လဲ ဆာဗာ တွေ လုံခြုံရေး ကို စပ်စု ပြီး စိတ်ဝင်စားခဲ့တာ မဆန်းပါလေ။
ဟက်ကာ တွေနဲ့လဲ ပေါင်းသင့်ပေါင်းပေါ့။ lol:-)))
အခု လောလောဆယ် စာရင်းကိုင် Financial Field ထဲ ကနေ ကြည့်ရင်တော့
သူကြီး မင်း ရဲ့ ရွာ ဘတ်ဂျက် ကို အတော်လေး စိတ်ဝင်စား နေပြန်ပြီ။
Top 10 ထဲ မှာ တက်ကြွ ပြီး active ဖြစ်တဲ့ ကိုယ့်လူတွေချည်းဘဲ။
Hope you areagood budget planner.
​ဒေသ တစ်​ခု ဒီမို​ရေစီ ထွန်းကားဖို့ဆိုတာ အဲ့ဒိ​ဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့ အရိုးစွဲပြီးသား အစဉ်​အလာ လူ​နေမှုစရိုက်​ ၊ အယူသည်းမှု ၊ ပြုမြဲ ဓ​လေ့ ထုံးစံ ၊ ​တွေး​ခေါ်မြဲ ​တွေး​ခေါ်ယူဆပုံစနစ်​ ဒါ​တွေကို ​ချေဖျက်​မပစ်​ပဲ အဆိုပါ​ဒေသမှာ ဒီမိုက​ရေစီ ထွန်းကားရိုးထုံးစံမရှိ ။
.ဒီကွန်မင့်က ကျမ အတွက် ခေါင်းစားစရာဖြစ်နေတယ်။ မှန်လည်းမှန်တယ်၊ အပြည့်အ၀လည်း မမှန်။ တစ်ဝက်မှန် တစ်ဝက်မှားလည်း မဟုတ်။ နောက်မှ ဒါကို ထပ်ရေးကြည့်ဦးမယ်။
ကော့မန့်တွေ ဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်းနဲ့ ခေါင်းတွေ အရမ်းမူးလာလို့ ဖတ်ရင်း ပြန်သွားပြီ
ဘာဘာ ဘာမှ မပြောတော့ဘူး……